Inguqulo 0.3.9 – More kuvumelana nezimo
December 26, 2009 by okunikezwayo 5 Amazwana
Le nguqulo entsha kuhlanganisa izici ezimbili eziyinhloko. Esokuqala ikhono ukuhlunga izilimi on iwijethi, Manje ungakwazi nibeke iphutha ngolimi lwakho kuqala noma ukuhambisa izilimi bezungeza nganoma iyiphi indlela othanda. Icons kuye kwavela ukuthi ikutshele uma lolu limi kusekelwa bing bese Google kanti uma lolu limi kulotshiwe ifomu ilungelo kwesokunxele. Ungase futhi ushintshe igama original ulimi negama layo English emkhatsini, ukuqonda ukuze yimuphi ulimi okuyinto kuba ngisho kusuliwe.
Siphinde kwashukumisela amanye amafayela ezizungeze wenza ifayela zokungena Ajax, lokhu kwenza le enye izilungiselelo post redundant (sethemba, usazise uma uthola izimbungulu) futhi kwenza izinto ngokuvamile snappier. Uma esetshenziswa usuke ukuze nje unzipping le nguqulo entsha ngaphezu kwalowo elidala, Kuphephile manje ukuba ususe wonke amafayela angekho sub-Tinkhomba (londoloza for transposh.php) heck, thina ngisho batusa ukuthi…
Ezinye izimpawu okuthakazelisayo kuhlelwa ukuba kukhululwe olandelayo, kanti uma ufuna ukugcina unolwazi. Landela Twitter umchachazo yethu…
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: esilawula, minor, ukukhululwa, iwijethi, plugin wordpress
Kwangathi 21, 2009 by okunikezwayo 2 Amazwana
Ngokwemvelo, emva zonke kokukhululwa ezinkulu kuza i update. Lesi update fixes ezincane ngempela (okuyinto nje benza HTML eliphukile – badinga isikhumbuzi mayelana ikhodi ngibheka?). Sithanda ukuthi ngumuntu ukubonga Fernanda noMike okuyinto baletha izindaba ekunakekeleni kwethu. Njengesipho esincane salokhu ukukhululwa esiye ufake iwijethi ukubukeka entsha usuke wamukela ukuba zama, ukuzijabulisa! 🙂
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: minor, iwijethi